Public Health in Myanmar: NGOs and their Participation and Involvement in PHC Activities of Myanmar !
NGOs and their Participation and Involvement in PHC Activities of Myanmar !
ဤစာစုတွင်း၌ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အန်ဂျီအို) ဆိုရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြသော နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ တတ်နိုင်သမျှ စာရင်းအင်းများ မဖေါ်ပြထားပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး မူဝါဒများမှာ ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံသားအားလုံး ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခ ပြည့်ဝစေမည့် အားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေး ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိစေရန် အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲပြီး ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်များကို ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို အခြေခံ၍ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်၊
သမ၀ါယမ၊ ဖက်စပ်၊ ပုဂ္ဂလိကများ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများကို ပြောင်းလဲနေသော စီပွားရေးမူဝါဒနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရေးအတွက် တွန်းအားပေးရန်၊
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၀၆ - ၂၀၁၁)ရဲ့ ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခန်းမှာ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးကို အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားပါတယ်။
(က) အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးတွင် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန်၊
(ခ) အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း၏ စီမံချက်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တစ်ဖွဲ့ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ စုပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း တက်ကြွစွာပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
(ဂ) အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းကို အရှိန်မပျက် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ မူဝါဒ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အလိုက် တစ်သားတည်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
အချို့ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးဟာ အဆင့်ဆင့်သော (ပြည်နယ်၊တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ) ကျန်းမာရေးကော်မတီတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလိုအလျောက် ပါဝင်နေပါတယ်။
အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်မှု အဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်ခြင်း
အနာကြီးရောဂါ ကင်းစင်ရေး လှုပ်ရှားမှု
တီဘီရောဂါ ပပျောက်ရေး (တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအချိန်တိုနှင့်ကုသခြင်း)
မည်သို့ပင်ဆိုစေ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အတွက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးမှ ပဏာမ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို အခြေခံ၍ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် အနေအထားကို ဝေမျှလိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Health policy, NGO, Public health
ကိုစိုးထက်ရေ ကောင်းတယ်ဗျို့။ ကိုစိုးထက် ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်ကူး တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာသာပြန် အသုံးအနှုန်းတွေ အသုံးများလိမ့်မယ်။ ဘဘောက်ဂါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာသာပြန်ပုံ ကွာခြားမှု သိပ်မရှိအောင် အဘိဓါန်လေး လုပ်ထားမလား စိတ်ကူးတယ်။ နမူနာတော့ တင်ထားလိုက်ပြီ။ တချို့ အင်္ဂလိပ်အသုံးတွေ ကျွန်တော် မသိလို့ မဖြည့်ရသေးဘူး။
NGOs and their Participation and Involvement in PH...
Different areas of public health